Who were Bengali, so called Rohingya?: စာရေးဆရာကြီး အောင်သင်း ပြောတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ
မေး ။ ။ ရိုဟင်ဂျာဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာပါဝင်ပါသလား ဆရာ၊ သူ့သမိုင်းကကော ဘယ်လို ရှိပါသလဲ၊ ဘီဘီစီကတော့ မြန်မာပြည်မြေပုံထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာကို ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် ပြသနာတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဆရာ့အနေနဲ့ကော ဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲ`လို့ ကျမက မေးပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ `ဆရာ့အနေနဲ့က ရိုဟင်ဂျာကိုတိုင်းရင်းသားထဲပါတယ်လို့တခါမှမယူဆခဲ့ဘူး။ သူ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင် သူဟာ တိုင်းရင်းသားထဲမှာမပါဘူး။ ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာ သူတို့တွေက နေရာယူချင်လာတယ်။ နယ်စပ်မှာဖြစ်နေတဲ့ အခါကျတော့အစိုးရကမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူး။ အဲဒီအခါမှာ ရိုဟင်ဂျာက ပြည်တွင်းမှာသူပုန်အနေနဲ့ ၀င်လာပြီး သောင်းကျန်းမှု့တွေတော်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗမာစာရေးဆရာကြီးအချို့တွေကလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေ အကြောင်းကို ၀တ္ထုတွေထဲမှာ တော်တော်လေးရေးခဲ့တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကလည်း လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနိုင်လာချင်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေက လက်နက်မဲ့တဲ့အခါကျတော့ ခံခဲ့ရတာတွေ ရှိတယ်။ ဗမာတွေက သိပ်ကိုမုန်းတီးခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာက တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာကို ဘယ်တုန်းကမှတိုင်းရင်းသားလို့မသတ်မှတ်ဘူး။ သူတို့က ပြည်ထဲဝင် ဇွတ်အတင်းနေရာယူ သောင်းကျန်းသူတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ ဆရာကတော့ အဲလိုပဲ မြင်တယ်`
ဆရာအောင်သင်းနှင့် အင်တာဗျူး ( ၂ ) မမေသင်္ကြန်ဟိန်း
Oh Mar Oo (facebook's wall)
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 10:24 AM
သောင်ကျန်းသူဆိုတာထက်ပိုပြီးယုတ်မာတယ်..နေထိုင်ခွင့်ဆိုတာကိုလက်ခံပေးနိုင်ပေမယ့်..တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးလို့ ဆိုလာတဲ့အတွက် ကချင်မှာတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းတိုက်နေမယ့်အစား ရိုဟင်ဂျာဘက်ကိုစစ်မျက်နှာဖွင့်သင့်ပြီ ..
There is no Allah but Dog and Mohammed ( Paedophilia Be Upon Him) is his Poo Poo.
ဗမာတစ်ခုတည်း ဒီမူဆလင် အမျိုးယုတ်ကောင်တွေကို မုန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
တစ်ကမ္ဘာလုံး က နိုင်ငံပေါင်းစုံ က လူမျိုးပေါင်းစုံ ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ က လူတွေအားလုံး က တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ပြဿနာပေါင်းစုံလိုက်ရှာနေတဲ့ မူဆလင်ပြဿနာကောင်တွေ ကို ရွံရှာစက်ဆုပ်နေကြတာပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မူဆလင်ကို ချစ်တဲ့လူမျိုးဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှိလို့ လဲ။
မြန်မာတွေ ဘာလို့ ကိုယ့် အချင်းချင်း တိုက်နေကြတာလဲ။ လက်နက် တွေ က ဘာလုပ်ဖို့ ထားတာလဲ။ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သတ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။
လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ကတည်းက တကယ့်ရန်သူစစ်စစ်ကို မတွေ့ ပဲ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်တိုက်နေ။
ဟင်္သာကိုးသောင်းလို လုပ်နေရင်တော့ ရိုဟင်ဂျာ-ဘင်္ဂလီ မူဆလင်တွေက ပျော်တာပေါ့။
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကို တခြားလူမျိုးတွေက ပြောလေ့ပြောထ ရှိတဲ့စကားတခွန်းရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ လူတစ်ယောက်ကို မသတ်ခင်တောင် ပြုံးပြပြီးမှ သတ်ကြတယ်ဆိုပဲ။ ခုလဲ မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသားအနွယ်ဖွားတို့ ဘာဖြစ်လို့ ကုလားကို မုန်းတယ်၊ အလိုမရှိဘူးဆိုပြီး လေကုန်ခံပြီး ကိုယ့်သိက္ခာ အကျခံပြီးပြောနေကြသလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးကို ဗန်းပြပြီး အမေရိကန် နဲ့ အင်္ဂလိပ်ကုလားတွေကို ဆော်ပလော်တီးသလို အပြုံးမပျက်ဘဲ တီးလို့ ရပါတယ်။ ဒီစောက်မျိုးတွေကို တကမ္ဘာလုံးက စောက်မြင်ကပ်နေကြတာလဲ အားလုံးအသိပါပဲ။ စောက်ကျင့်မှ မကောင်းကြပဲကိုး။
ဒီမိုကရေစီရရင်ပဲ ကုလားက တိုင်းရင်းသား
ဖြစ်မယ်ထင်နေလား မသိဘူး ၀က်သားစားပြ
၀က်ချီးငုံပြ ၀က်ဆီလူးပြ ပင်လယ်ထဲဆင်းပြ။
အဲလိုဆိုရင် ဘင်္ဂလားဒေရှေ့က မင်းတို့ကိုလက်
ခံလိမ့်မယ်၊မြန်မာမှာတော့ မရဘူး၊ ကိုယ်မေကိုယ်လိုးတဲ့ ခွေးကုလား မူဆလင်တွေ
စောက်ကုလား မြန်မာစာတောင်မတတ်ပဲနဲ့ ရခိုင်ကို နိင်ငံ
ခြားသာလုပ် ဘဂ်လီကို ရခိုင်သား လုပ်ချင်နေတယ် မအေလိုးကုလား ကူလီမျိုးက ဆင်းသက်လာတဲ့ကောင်
တွေ မင်းတို့ လီးကုလားတွေ ဘယ်တော့မှ မြန်မာနိုင်ငံသား မပေးဘူး ကိုယ်မေကိုယ် ၀က်ဆီသုတ်
ပြီးလိုးလိုက် စောက်ကုလားမွတ်ဆလိမ်တွေ ငကြောက်
comment ပေးထားကြတာတွေ တော်တော် ရိုင်းကြပါလားဗျာ.. ခင်များတို့ ဒီလောက်တောင် ကျနော်တို့ ရခိုင်တွေကို မုန်းနေကြလား...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.. ခုလို သမ္မတကြီးနဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေ ရခိုင်တွေအပေါ် ထားတဲ့ သဘောထားအမှန်ကို ထုတ်ပြန်ကြလို့...
ဟေး ကုလားစုတ်ကောင်တွေ မင်းတို့မရှက်ဘူးလား.မင်းတို့ ကောင်တွေ ဘယ်တော့မှ မြန်မာ့ တိုင်းရင်းသားထဲကို ဝင်လို့မရဘူးဆိုတာမင်းတို့ ဦးဏှောက်ရှိရင် သိကြလိမ့်မယ်လို့ ....ငါထင်တယ် မင်းတို့ ကုလားကောင်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ရခိုင်လူမျိုးလို့ ပြောပါစေ..သမိုင်းကိုတော့ လိမ်လို့မရဘူး. ရခိုင့်သမိုင်းကိုလိမ်လို့ မရဘူး...မအေလို့း စောက်ကုလားတွေ...........မင်းတို့က တကယ့် ကိုယ့်အမေကို လိုးတဲ့ ကောင်တွေ.........မူစလင်.ကျမ်းစာအုပ်မှာပါတယ်..အဲဒါကြောင့်လီးကို ဖြတ်ထားတာ စောက်ကုလားတွေ...........ငါ.ကတော့ဖာချရင် ကုလားမ ဘဲချတယ်........ကုလားမချရင် ဒူလာ ပျောက်တယ်တဲ့ .........
မွတ်ဆလင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ အလာပုံကို မမြင်
မိုဟာမက်ခွေးသူတောင်းစားနှင့် အလ္လာ ကိုယ်မေကိုယ်လိုး ဘယ်သူပိုတော်သလဲသိချင်
ရင် ဖတ်ကြည့်ပါ ၀က်ရေးတဲ့ ကိုရမ်၃၃း၅၆မှာ
တော့ အလ္လာကိုယ်မေကိုယ်လိုးက ခွေးသတောင်းစား
ငါရခိုင်မဟုတ်ဘူးဟေ့ ဒါပေမယ့် ရခိုင်ဟာ ငါတို့ တိုင်းရင်းသား ငါတို့ သွေး ငါတို့ ညီအကိုပဲ ငါတို့ မိသားစုထိရင် ငါတို့ ဝိုင်းစော်မှာပဲ ကချင်တွေ ကရင်တွေလည်း ကိုယ့်အမျိုးကို တိုက်နေမယ့်အစား မအေလိုးကုလားတွေကိုတိုက်ပါလား မင်းတို့ ကောင်တွေ ကုလားကအင်အားကြီးတော့ ကြောက်နေကြတယ်မဟုတ်လား ဘယ်လိုပဲအင်အားကြီးကြီး အားလုံးဝိုင်းတိုက်ရင်အောင်ရမှာပဲ တကမ္ဘာလုံးမှာလဲ ကုလားကို ၀ိုင်းတိုက်ဖို့ အမျိုးဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်။ အခုရေးတာဟာ ကုလားတွေရေးနေတာကို ပြန်ဖြေရှင်းဖို့ ရေးနေတာမဟုတ်ဘူး ဒို့ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေသိဖို့ ရေးတာပဲဖြစ်တယ်
ချီးကုလားတွေ if you brave follow the this bloghttp://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4291796068925868773
မြန်မာတိုင်းရင်းသား ညီအကိုတို့ အထူးသဖြင့်
ဆယ်ကျော်သက် ရခိုင်မဟုတ်သော တိုင်းရင်း
လိုတာကတော့ မုတ်ဆိတ်စုတ်ဖွားနဲ့ ခေါင်းမှာ
မသိရင် သံပုရာခွံပုံစံ ဦးထုပ်ဆောင်းထားသော
ကုလားများသည် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ခိုးဝင်လာ
သော နိုင်ငံခြားသားအနွယ်များသာ ဖြစ်၏ မြန်
မာတိုင်းရင်းသားများ လုံးဝမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ယင်းကုလားများအား လုံးဝ လူရာမသွင်းကြရန်
နှင့် အမျိုးသားရေးအသိဖြင့် အမြဲသတိရှိကြရန်
allah ဆိုတာမရှိပါဘူး..စိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်ထားတာပါ..အရင်လူတွေက စိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်ပြီးနောက်မိုဟာမက်က လုပ်စားသွားတာပါ.သူမိန်းမယူချင်တိုင်းယူလို့ရအောင်နယ်ချဲ့ချင်တိုင်းချဲ့လို့ရအောင် ဦးနှောက်မရှိတဲ့ကုလားတွေကို စည်းရုံးလို့ရအောင် ကလိမ်ကကျစ်လုပ်သွားတာပါ.မရှိဘူးဆိုတာ သက်သေက အလွန်အလွန်ခိုင်လုံပါတယ်.အခုဆိုရင် အစ္စရေးတို့ အမေရိကန်တို့ အင်္ဂလန်တို့က သူတို့ကိုဗုံးတွေချဲနေတာကိုလဲ အလူးအလဲခံနေရတာသာကြည့်ပေတော့.သူအချင်းချင်း လဲဗုံးခွဲသတ်နေကြတာသာကြည့် ကုလားတွေက သူတို့အချင်းချင်းသတ်ရင်းကုန်သွားမှာပါ..Allah ဆိုတဲ့စိတ်ကူးယဉ်လို့တောင်မရနိုင်တဲ့ အကောင်ကြီးကဘာမှ မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ..ညီအကိုတို့ ကုလားဆိုတဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ ဘ၀ကလွတ်အောင်တခြားဘာသာတွေကိ်ုပြောင်းလိုက်ပါတော့.မပြောင်းရင်သင်တို့သက်ဆိုးရှည်မှာမဟုတ်တော့ပါ..
ကျွန်တော်က ရခိုင်စစ်စစ်ပါ အကိုတို.ရယ် ဒို.တတွေကို ကူညီကြပါဦး ဘယ်တုန်းက မှမရှိခဲ့တဲ့ ကုလားတွေက ခု တိုင်းရင်းသားအဖြစ်အသက်သွင်းဖို.တာစူးနေကြပါပီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်တွေရောက်ပီးမှ အင်္ဂလိပ်တို.က အိန္ဒိယ နိုင်ငံရဲ. ပြည်နယ်လေးတစ်ခုဖြစ် ဒို.မြန်မာနိုင်ငံကိုလုပ်ခဲ့တာ အကိုတို.အသိပါပဲ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကုလားတွေကို လယ်လုပ်ခိုင်း အောက်ခြေသိန်းအပိုင်းလုပ်ခိုင်းတာ အကိုတို.လည်းအသိပါပဲ အဲဒီကနေ မပြန်တော့ဘဲ ဘူးသီးတောင်မောင်တော ရခိုင်ပြည်အနှံမှာ နေခဲ့ကြတယ်လေ အဲဒိအချိန်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာတွေက မအုပ်ချုပ်ရခဲ့တာ သူတို. တခါးမရှိ ဓါးမရှိဝင်ခဲ့တယ်လေ သူတို.အဲလိုဝင်လို.နေတာ ခုတိုင်းရင်းသားအဖြစ်တောင်းနေကြပီ။ အဲဒါက အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာတွေမအုပ်ချုပ်ခဲ့လို.ပြည်တွင်းသို.စိမ့်ဝင်လာတဲ့ ဆားငံရေတွေလေ။ ခုနောက်ပိုင် ဘင်္ဂလားဒေခ်ျနိုင်ငံဆိုတာလူတိုင်းသိတဲ့အတိုင်း သန်းပေါင်း ၁၆၀ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံလေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ. ရှမ်းပြည်လောက်ရှိတဲ့ပြည်က ဒီလောက်လူဦးရေထူထပ်စွာပေါများနေတာကို မြန်မာနိုင်ငံ ကထူးစောင့်ကြည့်ရမှာပဲ အိန္ဒိယ ကတောင် ခြံစည်းရိုးကို သံတွေနဲ.ကာဆီး တာနေကြတာသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ။ ခေတ်သစ် ကုလားတွေက လမ်းတွေကိုတော်တော်သိနေကြပီအကိုတို.ရယ် ၇ခိုင်နယ်စပ်မြို.များကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျကနေဝင်တယ် ပီးတော့ လှေကြီးတွေနဲ.သွားတယ် ရန်ကုန်ရောက်တော့ သူတို.ဂေါင်းဆောင်တွေက ဗလီဆောင်တွေမှာထားတယ် ဗလီဆိုတော့ ဗမာစစ်သားတွေ ရဲသားတွေ ဘယ်သူမှ ဝင်မရတဲ့နေရာဆိုတော့ သူတို.လုံရှံတယ် ရန်ကုန်မှာနေပီးတော့ နိုင်ငံတကာကို ပို.တယ် ပို.တာသူတို.မှာ အာရပ်ကမ္ဘာနဲ.ဆက်စပ်ထားတဲ့ ကုလားတွေရန်ကုန်မှာ အများကြီးရှိတယ် ရန်ကုန်မှာ နေမယ့်သူတွေကို အပြင်လုံးဝမထွက်ခိုင်းပဲ စကားသင်တယ် ပြီးမှထွက်ခိုင်းတယ် မှတ်ပုံတင်ကို ငွေအများကြီးပေးပီးလုပ်တယ် ဒါဆို ၇န်ကုန်သားဖြစ်ပီပေါ့ အဲလို ရန်ကုန်သားဖြစ်တဲ့ အကောင်တွေအများကြီးပါပဲ ရန်ကုန်မှာ ကုလားဘာကြောင့်များတယ်ဆိုတာ အဲဒါကလာတာပါ။ ခုဆို ရန်ကုန်တင်မကသေးဘူး စစ်ကိုတိုင်း ဧရာဝတီ တိုင်းနဲ. အခြားတိုင်းတွေကိုသူတို.ဝင်ခဲ့တာ ကြာပါလေရော ကဲ ဒီလောက်ဆို ကုလားစုတ်တွေရဲ. ညာဏ်ကို သိသင်ပါပီး သူတို.တိုင်းရင်းသားဖြစ်လို.ကတော့ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ နိုင်ငံလုံး မြန်မာပြည်ထဲရောက်ပီလို.သာမှတ်လိုက်တော့ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျရဲ.မြို.တော် ဒါကာ ဟာ လာမယ့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာရေမျက်နှပြင်ရဲ.အောက်ကိုရောက်မှာလေ အဲဒါကုလားတွေကသိတယ် အဲဒါကြောင့်တောင်ကုန်းထူထပ်သောမြန်မာနိုင်ငံကို သူတို.မျက်စေ့ ကျနေတာ ။ ကဲ ရေးရင်ရေးလို.မဆုံးပါဘူး ကုလားတွေက မြန်မာနိုင်ငံကို ၇၈၆ မှ မူဆလင်နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်လို.ကြွေးကြော်ထားတာလေ လူ.အခွင့်အေ၇းနဲ. တိုင်းရင်းသားသတ်မှတ်ရေးဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး ဒီမိုကရေစီနဲ. ကုလားတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ရေးဟာ တစ်ခြားစိပါပဲ ဒို.တိုင်းရင်းသားအားလုံး ကျမ္မာစွာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို မူဆလင် တွေလက်ထဲက ကာကွယ်ရန်ပြောရင်း....။...လေးစားစွာဖြင့်
ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာတွေတော့ ဟစ်တလာ ဂျူးတွေ အစုလိုက်သတ်သလို ဒီကုလားတွေတော့သေကုန်တော့မှာပဲ ကမ္ဘာထဲမှာသူ့နေရာချီပဲ လူသားတွေကောင်းရာကောင်းကြိုးလုပ်ပါလား ဘာသာရေးလဲ သိမ်းသွင်းတယ် ဒီလောက်အောက်တန်းကျတာ ကမ္ဘာမှာထားဖို့မကောင်းဘူးသတိထားနေတော့
1968 ခုနှစ်အတွင်း ပိုလန်မှာ အစိုးရမှဂျူးတွေကိုကိုင်တွယ်သလို တစခန်းထလာတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာကိုကိုင်တွယ်ရတော့မယ်ထင်တယ်။အဲဒီတုန်းကဒုတိယကမာစစ်လက်ကျန်ဂျူးတော်တော်များများအမေရိကားရောက်ကုန်ကြတယ်။ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းစေတနာရှေ့ထားပြီးကူညီတဲ့အနေနဲ့ပိုလန်မှာလိုကိုင်ရင် ဒီကောင်တွေအကုန်အမေရိကားရောက်သွားမယ်။အဲဒီအမေရိကားရောက်သွားရင်လည်းသောက်ရှက်မရှိတဲ့ကောင်တွေတိုင်းရင်းသားတောင်နေအုံးမယ်။
ကျနော့် စိတ်ကူးကတော့ဒီကုလားတွေကိုဘင်္ဂလီခေါ်တောလို့ ဘဲခေါ်စေ့ ချင်တယ်။ သူတို့ သုံးနေတဲ့ နံမည်က သူတို့ ဘာသာနဲ့ ရခိုင်သားလို့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်တယ်ဗျ။ အဲဒါသတိထားပါဗျာ။ ခေါ်တောဘင်္ဂလီ (သို့ ) ဘင်္ဂလီခေါ်တောလို့ ပြောင်းခေါ်ကြပါဗျာ။
သူတို့ အင်မတန်သုံးချင်တဲ့ နံမည်ကိုရှောင်ကြရအောင်ဗျာ။ ကျနော့် အဖေက ရခိုင်လူမျိုးပါ။ ကျနော့် အဖိုးနဲ့ အဘိုးက ရခိုင်စစ်စစ်ဗျ။ ကျနော်ကတော့ရခိုင်တွေကိုချစ်တော့ တော်တော်ခံပြင်းတယ်ဗျ။ အစိုးရကိုလည်းမကျေနပ်ဘူးဗျ။ဒီလောက်ပြဿနာတက်နေတာ စစ်တပ်ချထားဘို့ နိုင်ငံနယ်နမိတ်ခြံစည်းရိုးခတ်ဘို့ မစဉ်းစားဘူး။ မဟုတ်တဲ့ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေတယ်။ စိတ်ပျက်တယ်ဗျာ။ ဒီအစိုးရ အုပ်ချုပ်နေသေ၇ွ့ တော့ရင်လေးစရာပါဗျာ။
နော်ဝေးက ရုရှားနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့နယ်နမိတ်တလျောက်မှာ ခြံစည်းရိုးကာနေပြီ ။ ရုရှားဆိုတာ ကမ္ဘာ.စူပါပါဝါနိူင်ကြီးနော် ။ ဒို့နိူင်ငံက ဘာဖြစ်လို့ ဘဂ်လားဒေ့်ရှ် နဲ့ နယ်စပ်မှာခြံစည်းရိုးမကာနိူင်ရမှာလည်း ။ ဘယ်လောက်ကုန်မှာမို့လို့လည်း ။ CCTV တွေ MOTION DETECTOR တွေ NIGHTVISION CAMERA တွေတပ်ထားမယ် ။ ဒါတွေတပ်ဆင်ထားရင် အခုဖြစ်သွားရတဲ့မောင်းတောဖြစ်စဉ်လို အငိုက်မိခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးကို ၈၀% လောက်ကာကွယ်ပြီးဖြစ်သွားမယ် ထင်ပါတယ် ။
ဖြစ်ပြီးသွားတာကို ဝမ်းနည်း ဒေါသထွက်နေတာက တပိုင်းပေါ့ ။ နောက်ထပ်မဖြစ်လာအောင် ဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်ဦးပြီး အသာစီးရအောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကပိုပြီးအရေကြီးတယ် လို့ထင်ပါတယ် ။